AC Fan, AKKU VAC kurudza RECHARGEABLE kurudza DC Fan - HONGBO
HONGSHUO nemuteresi akamuka matambudziko kwenguva pfupi, AYATER ndibatsirei kurigadzirisa yakakodzera, kuvonga chaizvo basa rakanaka! Nomuteresi wangu akamuka matambudziko kwenguva pfupi, Aya TER ndibatsirei kuchiwirirana, prventing kurasikirwa yangu, kuvonga chaizvo basa rakanaka! Nomuteresi wangu akamuka matambudziko kurigadzirisa nenguva, prventing kurasikirwa yangu, kuvonga chaizvo basa rakanaka!
EC dzino feni
External rotor axial feni
duku axial feni
Ningbo Hongbo Weite Motor Co., Ltd. ari nyanzvi kuva uye mukugadzira AC, DC axial mafeni uye feni nenhumbi. zvigadzirwa edu Anonyanyowanika kushandiswa otomatiki kudzora zvokushandisa, simba hurongwa, makabhati, nomoto mano, zvokurapa midziyo uye zvokuridzira nomumbure nokukurukurirana zvivako uye nezvimwewo IT. Hongbo Fans vane zvinhu zvakanaka kutarira, wokufema guru, pasi ruzha uye upenyu hurefu. We vakabudirira akawana CE, Rohs mvumo. Mumwe nhindi Hongbo chigadzirwa ari crystallization kuti Hongbo kuti nesimba uye uchenjeri. Pashure emakore kuedza, Hongbo ane yokuwanda vatengi kumba uye kunze uye zvigadzirwa yedu zvikuru aivigirwa kuna Europe, America, Middle East, Africa, Southeast Asia uye dzimwe nyika, pakati izvo zvinhu zvedu anobuda unhu chairemekedzwa mu South Korean kumusika.
AC Fan 17050B2H 220V 172 * 150 * 51mm, ac axial feni
20060 8 padiki Machine Rwomukati Cooling Axial Fan 20 ...
17040 172x150x40 mm shanu mashizha axial Ac feni fo ...
© Copyright - 2010-2017: All Rights Reserved. Tips - Featured Products - Sitemap - Mobile Site
Small Fan , purasitiki kurudza murindi , Metal Impeller Ac Axial Fan , rechargeable dzinoshandisa , axial chokubuda feni, 80mm Fan Guard, Products All